Njengezinja neekati. Iincwadi ezi-4 malunga nabahlobo abasenyongweni aba-4. | Uncwadi lwangoku
Inyani yile ngekhe uhambe ixesha elide ngaphandle kokubhala malunga nenye into, ukuba kunokwenzeka inemilenze emine kunye neentlobo I-canis vulgaris. Kodwa kufuneka ndivume uvelwano lwam ngo felis catus, endiyithandayo ngokuzimela kwayo kunye nomlingo wayo omangalisayo kunye nomangalisayo. Kusapho lwam kukho yonke into. Amakati IiBlondes, ezimnyama, kunye nemivimbo ezihamba kwigalari okanye kwipatiyo yendlu katatomkhulu wam. Kwaye siye sanayo izinja (XNUMX% ilebheli emhlophe) okoko ndiyakhumbula.
Abathathu bokugqibela abahlala kunye babekho pooches ezimbini kunye nekati ye-siamese. Kusele omnye kuphela: Cuckoo, I-Pekingese mestizo edlulile kwinkulungwane ye-doggy kunye ne-16 yeminyaka yomntu. UPerilla, owalahlekileyo uSiamese owafunyanwa ngumakazi, naye wafikelela ehlotyeni eli-16, kodwa waphoswa phantse kwiminyaka emine eyadlulayo. Kancinci emva kokuba naye enze njalo Chiqui, Umenzi wewayini omncinci kwaye onobuqili onjengaye, ofike nge-15. Eli nqaku linikezelwe kubo. Banokubutshintsha ubomi bakho kwaye ngokuqinisekileyo baya kukwenza ngcono kuwe. Mhlawumbi ngenye imini ndiza kubhala amabali abo. Okwangoku ndicebisa ezi 4 zisuka kwabanye abaphambili.
Ezintathu zezi zihloko zisayinwe ngababhali baseBritane kuba ukuba kukho ubuzwe obubhala ngezinja kwaye, ngakumbi, malunga neekati, zezaboonyana baka-Albion.
1 Ikati elahlekileyo egama linguBob - uJames Bowen (ngo-2013)
2 Ikati Ephilise iintliziyo-URachel Wells (2016)
3 Inja eTshintshe uBomi bam-uJohn Dolan (2015)
4 Ngamehlo am amancinci-uEmilio Ortiz (2016)
5 Kutheni uzifunda
Ikati elahlekileyo egama linguBob - uJames Bowen (ngo-2013)
Xa UJames Bowen Ufumene ikati ebomvu ebomvu wayexinene ekufikeni kweflethi yakhe, wayengacingi ukuba ubomi bakhe buza kutshintsha kangakanani. UJames wayehlala ezitalatweni zaseLondon kwaye into yokugqibela awayeyifuna yayisisilwanyana sasekhaya. Nangona kunjalo, wayengenakuxhathisa ukunceda ikati ekrelekrele kakhulu, awambhaptiza nguBob. Baye bahlukaniswa, kwaye ukwahluka kwabo, ukuhlekisa, kunye neziganeko eziyingozi ngamanye amaxesha zabuguqula ubomi babo kwaye baphilisa amanxeba okudlula kwabo okukhathazekileyo.
Ikati Ephilise iintliziyo-URachel Wells (2016)
Ubomi be Alfie, ikati emnene yaseLondon, ijika iidigri ezili-180 xa kufuneka ilishiyile ikhaya apho ikhulele khona. Yedwa kwaye ulahlekile ezitalatweni, yonke into iyatshintsha xa ufika e-Edgar Road, indawo egcwele izitiya kunye nezindlu zosapho olunye. Ungacinga ukuba uyakufumana usapho olutsha, kodwa abahlali bommandla abakakulungeli ukwamkela. Abanaxesha lokujongana nayo. Nangona kunjalo, baya kufumanisa ukuba u-Alfie unayo Isipho esikhethekileyo: intuits Iminqweno yabantu egcinwe kakuhle kwaye banokulungisa into eyaphukileyo ebomini babo.
Inja eTshintshe uBomi bam-uJohn Dolan (2015)
Sisekhona eLondon, kodwa ngeli xesha nenja, lowo uwela ebomini bukaJohn, osindayo kangangoko anakho esitratweni. George Uyinja eyoyikisayo uJohn ayithandayo kwaye ugqiba kwelokuba ayinyamekele. Yiyo loo nto ebuyisa ithemba kuba unesizathu sokuvuka ntsasa nganye, kwaye ade abuye netalente yakhe yokuzoba. Ke ehleli ecaleni kwendlela, uJohn uzobe imifanekiso yenja kunye nehlabathi elibangqongileyo kwaye ayisabonakali. Akasenguye umngqibi, ngoku abanomdla beza kuthenga imizobo yakhe. Kwaye kuseza kubakho ezinye izimanga.
Ngamehlo am amancinci-uEmilio Ortiz (2016)
Umhle ibali lobuhlobo, uthando kunye nokuphuculwa okuxelwe ngamehlo enja ekhokelayo. Cross uyinja ekhokelayo neyoyikekayo. UMario ngumfana ongaboniyo ozama ukwenza indlela ebomini. Bonke benza iqela elingenakwahlulwa. Le noveli isixelela ngeentsini ezihlekisayo zoMnqamlezo kwihlabathi labantu. Umdlali wakhe, UEmilio ortiz, isixelela inyani ukuba uyazi kakuhle, kulungile inja yakhe esisikhokelo, egama linguSpock, phantse unobungozi njengoMnqamlezo.
Ngenxa yokuba bahlala bonwabile, bakwenza wonwabe kwaye bayonwabisa. Kubo bonke. Kodwa ukuba ukhe wanayo okanye unayo inja okanye ikati, uyakonwabela ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » Njengezinja neekati. Iincwadi ezi-4 malunga nabahlobo abasenyongweni aba-4.